မေရီလန်းမိသားစု စာပေစကားဝုိုင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
မုိုးမခစာအုပ်စင် - အထင်ကရ မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ
Psy & North Korea
7th July and Student Unions - Ko Ko Gyi
Thiha Maung Maung - Dagon Tayar Postcard
Maung Ni Mon - Poem
ကာတွန်း - Ath - ဒါတွေအပြင် ပယောဂပါ ပါတယ် (ကာတွန်း)
☮ “မေ ရီ လ န်းမိ သား စု စာေ ပ စ ကား ၀ို င်း”
☮ ၀ င်းေ ဖ ၊မောင် သ စ် ဆ င်း၊မေ ငြိ မ်း၊ ခ က် မာ
☮ ၂ ၀ ၁ ၃ ၊ ဒီ ဇ င် ဘာလ ၊ ၂ ၁ ရ က် ၊ စနေနေ့ ၊
(ေ န့ လ ည် ၁ နာရီ မှ ၅ နာရီ ထိ)
☮နေ ရာ။ သပြေ ညို မြ န် မာစာသ င်ကျောင်း
591 1 R idg way A ve.
R o c k v i l le, M.D.20 851 -193 1.
☮ စိ တ် ပါ ၀ င် စား သူ များ ပါ ၀ င် တ က်ရောက်ပေးဖို့ ဖိ တ် ကြား ပါ ရစေ . . . . . ။